Howlgal ka dhacay J/Hoose iyo war kasoo baxay DANAB | KEYDMEDIA ONLINE
Howlgal ka dhacay J/Hoose iyo war kasoo baxay DANAB
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr meelood ka billowday howlgallo ay ku doonayso inay kula wareegto degaanada gacanteeda ka maqan.
KISMAAYO, Soomaaliya - War kasoo baxay Ururka 5aad, Guutada 16aad ee Kumandoska Danab ayaa lagu sheegay in howlgallo qorsheysan oo lagu bur-buriyey goobo argagixisada Al-Shabaab ku dhuumanayeen ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubadda Hoose.
Howlgalkaan ayaa la sheegay in lagu dilay in kabadan 15 xubnood, oo katirsan Al-Shabaab, iyadoo lagula wareegay saldhigyadooda oo ay kasoo abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada kale ee ka dhaca gobolka Jubadda Hoose.
Ciidamada ayaa dagaal kooban la galay Al-Shabaab intii uu socday howgalka oo ujeedkiisu yahay in lagu sugo amaanka Kismaayo, oo ay doorashadda ka dhacayso, waxaana dowladda kala kaashanaysaa Jubbaland.
Gobolka Jubbada Hoose oo Al-Shabaab uga sugan tahay tuulooyinka u dhaxeeyay degmooyinka waaweyn ayaa waxaa ka howgala Ciidanka Mareykanka, oo saldhig ku leh Baar-Sanguuni oo labo sano kahor ay degeen, si ay halkaasi uga abaabulaan howlgallada gaarka ah ee ka dhanka ah Kooxdan xiriirka la leh Al-Qaacida.
Inkastoo Mareykanka uu Ciidankiisa inta badan la baxay January 2021, haddana waxaa ku sugan dalka tiro aan ka cayimid oo askar ah, kuwaasoo ilaaliya safaaradiisa ku taalla Xalane iyo saldhigyada ay AFRICOM ku leedahay Beleddoogle iyo Baar-Sanguuni.